IGuicavane: isikhombimsebenzisi sokulanda uchungechunge namabhayisikobho kusuka eCuevana | Kusuka kuLinux
IGuicavane: isikhombimsebenzisi sokulanda uchungechunge namabhayisikobho kusuka eCuevana
IGuicavane Kuyinto a Isikhombimsebenzisi sokuqhafaza yewebhusayithi ethandwayo Umgede (Umncintiswano kaNetlix wase-Argentina). Kusivumela ukubuka noma ukulanda uchungechunge namabhayisikobho ngendlela elula, sisebenzisa amasevisi ahlinzekwa yiCuevana. ekuthuthukisweni kodwa ngokuphelele Kusebenza futhi yisixazululo esichazayo salabo abalanda kusuka kuCuevana kuye ku- bheka ungaxhunyiwe ku-inthanethi.
Uchungechunge lokusakaza nama-movie.
Landa uchungechunge nama-movie kukhompyutha yakho.
Uhlu lochungechunge oluthandayo.
Isidlali esenziwe ngokwezifiso.
Igama lefayela elenziwa ngezifiso (ungakhetha ifomethi yegama lefayela lapho ulanda).
Izimpawu ezizenzakalelayo (ngemuva kokubuka uchungechunge, umaki ukuze wazi kahle ukuthi yiziphi iziqephu ozibonile)
Ama-akhawunti we-Premium (okwamanje kwi-Megaupload kuphela).
Amasayithi wokulanda amaningi (ungakhetha phakathi kwemithombo ehlukene yokulanda efana neMegaupload, Hotfile, Filefactory, njll).
Qalisa kabusha ukulanda (uma uvala uhlelo ngengozi, ngokuzayo lapho ukulanda kuzoqala lapho kugcine khona okokugcina).
Ukulanda ikhodi yomthombo bese ufaka uhlelo, sebenzisa imiyalo elandelayo:
i-git clone https://github.com/j0hn/guicavane.git cd guicavane sudo python setup.py faka i-guicavane
Ku-ArchLinux nakokuphuma kokunye, ungayifaka kusuka kuma-AUR repositories, ngomyalo olandelayo
i-yaourt -S i-guicavane-git
Umthombo: IGuicavane & Ubutronics
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » IGuicavane: isikhombimsebenzisi sokulanda uchungechunge namabhayisikobho kusuka eCuevana
Kuhle kakhulu, kufakwe kusuka kuyourt. I-cuevana iphonsa amaphutha kepha iseva ye-pelispedia isebenza nge-10
Idatha enhle kakhulu iDieguito!
Ukuhaga okukhulu nokubonga ngokwabelana!
U-Eduardo Battaglia kusho
Phendula u-Eduardo Battaglia
UDiego Vilas kusho
Ngenxa yezinguquko eziqhubekayo i- #uevaCuevana enayo, lolu hlelo lokusebenza lwalunginika amaphutha athile; Ngakho-ke ngixhumane nonjiniyela (inkosi yangempela, upholile) futhi wangibuza ithuba lokusebenzisa uhlobo lwentuthuko lukaGuicavane; ikhophi yombhalo.-
«Ekugcineni, uma uzizwa uthanda, ngingancoma ukuthi uzame inguqulo ekuthuthukiseni i-guicavane, lapho sizama khona izinto eziningi futhi ngaphandle lapho kusebenza kangcono kunenguqulo" ezinzile "(manje engazinzile konke). Ukuhlola le nguqulo kufanele ukwenze:
$ git clone https://github.com/j0hn/guicavane.git
$ cd guicavane
$ git ukulanda
$ git amasayithi wokuhlola
$ python bin / guicavane # lokhu kuvula i-guiacavane
Futhi ukuyivuselela (okufanele uyenze njalo uma usebenzisa le nguqulo) kufanele ukwenze:
$ git donsa »
Ibhulogi enhle kakhulu,
Phendula u-Diego Vilas
iRe - ADNFriki.com kusho
Kunginikile namaphutha athile, noma kunjalo bravo wonjiniyela we-guicavane: D.
Phendula iRe - ADNFriki.com
I-Open Ocean itshale imali eyisigidi esisodwa kuZentyal